I-EBOOKS Library Archives - i-Afrikhepri Fondation
NgoLwesihlanu, Okthoba 15, 2021
Welcome IMIKHAKHA IZINCWADI ZAMABHAYIBHELI
AmaKamite aya olwazini, olwazini oluqondile, ngoba umuntu ongenalwazi noma ophindaphindayo wemibono nesayensi yabanye akuyona i-Kamite. Ngeke sikwazi...
I-Theosophical Society iyiqembu elingelona elezinhlelo elinezinhloso zalo yilezi: Ukwakha isisekelo sobuzalwane bomhlaba wonke besintu ngaphandle kokwehlukanisa ubuhlanga, ubulili noma ibala, ukukhuthaza ...
Ingokomoya akuyona uhlelo lwenkolo noma ifilosofi yamasiko. Kungokuhlangenwe nakho, okuzimele kunoma iyiphi inkolelo, inkolo noma imfundiso. Chofoza encwadini ukuyivula ku-PDF ...
ILabhulali Yezempilo Nezomtapo Wezempilo (i-PDF)
Umuthi ohlukile uhlukile kunomuthi osemthethweni. Usebenzisa i-acupuncture, i-homeopathy, i-naturopathy, umuthi wamakhambi, i-osteopathy, i-psychotherapy, i-hypnotherapy, njll. Chofoza encwadini ukuyivula kuPDF [bookhelf ...
Izimfihlakalo Zelabhulali YaseGibhithe Lasendulo (PDF)
Amapiramidi aseGibhithe yizona ezidume kakhulu kuzo zonke izikhumbuzo zasendulo. Chofoza incwadi ukuze uyivule nge-PDF
Ukuqalisa inqubo lapho umuntu osemusha ethola khona isimo esingokomoya esiphakeme ngokuthola ulwazi nokwamukelwa emisebenzini yomphakathi wezenkolo, umphakathi oyimfihlo noma ...
Ilabhulali Yezemimoya ne-Esoteric (PDF)
Ukusebenzelana nemimoya (okuvela kulokho okwenzeka e-Latin occultus, "kufihliwe, kuyimfihlo") kuchaza bonke ubuciko besayensi nobusayensi (i-alchemy, ukubhula ngezinkanyezi, umlingo, ukubhula, umuthi wokulumba) okuthinta izimfihlo zemvelo, yini okungekho ...
Imfundo yehluleka lapho inika amandla inqubo futhi ayikwazi ukuxazulula izingxabano zethu ezingokwengqondo. Imfundo kufanele isize ukucabanga ngokukhalipha. Ukuvuthwa akuwona umbuzo ...
Ekwenziweni kwalawa mahlaya, i-Unesco icele abenzi bezithombe abavela emazweni ahlukene. Chofoza incwadi ukuze uyivule nge-PDF
Umtapo we-Christian Esoteric (PDF)
I-Esoteric Christian, eyaziwa nangokuthi i-hermetic Bokreste noma ubuKhrestu obuyimfihlakalo, iqoqo lemijikelezo engokomoya ebheka ubuKhrestu njengenkolo yezimfihlo, futhi ithi khona futhi ...
Izimfihlo Nezimfihlakalo Zamathuluzi (PDF)
Ingabe kukhona izimfihlo nezimfihlakalo ezifihliwe kubantu abavamile? Nazi ezinye izincwadi ezizokwazi ukuphakamisa ingxenye yeveli le-Isis futhi uzodalula izimfihlo ezithile zesintu. Chofoza encwadini ...
Umlando Jikelele we-Afrika Library (PDF)
Kungumsebenzi wokuphayona, ongenakulinganiswa kuze kube namuhla ekufisweni kwawo wokuhlanganisa umlando wezwekazi lonke lase-Afrika, kusukela ekubukekeni komuntu kuya ezinseleleni zesimanje ezibhekene nazo ...
Library of Religions (PDF)
Inkolo kufanele ibe yindlela yokubumbana komphakathi kunokuba ifane ngokufana nokwehlukana. Ngoba, kunezindlela eziningi eziholela embusweni, kodwa uNkulunkulu munye ku ...
Ikhasinkomba 1 of 2 1 2 okulandelayo
Uma ulithandile, sicela wabelane ngaleli khasi. Ungathumela futhi nendatshana yakho kuleli sayithi.
Le windi lizovala ngokuzenzakalelayo kumasekhondi we-10